कान छेड्नु फेसन मात्र हैन ,सरिरलाई पनि येस्तो फाईदा ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
कान छेड्नु फेसन मात्र हैन ,सरिरलाई पनि येस्तो फाईदा !
पछिल्लो समय युवा पुस्ताले कान छेड्नुलाई फेसनकै रुपमा विकास गरेका छन् ।
पहिला गहना लगाउनका लागि नेपाली महिलाले कान छेड्ने गरेको भएपनि अहिले केटा केटी, महिला पुरुष सबैले कान छेड्ने गरेका छन् । कसैले रहरले कसैले करले कान छेडे पनि त्यसको स्वास्थ्यका लागि भने फाइदा पुर्‍याउने एक अध्ययनले देखाएका छ ।
कानकोलोतीमा हुने एक प्वाइन्टका कारण मानिसको जीवनमा कानले तरंग पैदा गर्छ । कान छेड्दा प्राय त्यही प्वाइन्ट वरपर छेडिने भएकाले मानिसको मानसिक स्वास्थ्यसहित शारीरिक स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक रहेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।
कान छेड्दा हुने फाइदा
कानको तल्लो भागमा दबाब पुग्ने हुँदा यसले तनाब कम गर्न सहयोग पुग्छ । कानको लोतीमा आउने दबाबले मस्तिष्कको समस्याबाट पनि बचाउँछ ।मस्तिष्कको क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्छ ।
आँखाको ज्योतिलाई सन्तुलित राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।कानको सूचक प्वाइन्टमा हुने दबाब पाचन प्रणालीसँग पनि जोडिएका भएकाले भोक लाग्ने तथा पाचन प्रणाली मजबुद हुने पाइएको छ ।शरीर सुनिने र प्यारालाइसिस हुने जोखिम पनि कम हुने वैज्ञानिकहरुको भनाई छ ।